Ogaden News Agency (ONA) – Shirkada Salaam Bus oo Macaamiisheeda Usheegtay War Aysan Kufarxin.
Shirkada Salaam Bus oo Macaamiisheeda Usheegtay War Aysan Kufarxin.
Posted by Dulmane	/ January 27, 2018
Wararka aan kahelayno magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya caqabado horleh oo kahor yimid Kambaniga basaska ee lagu magacaabo Salaam Bus, kaas oo waayadan ladaalaa dhacayay caqabado kaga imaanayay dhinaca bulshada.
Kambaniga Salaam Bus, oo laga leeyahay Gobolka Tigreega ayaa ukala gooshi waayay Gobolada wadanka oo uu horaan uga shaqayn jiray, waxaana laga mabnuucay qaybo kamid ah wadanka sida Gobolka Axmaarada iyo Gobolka Oromada oo ah meelihii uu ugu badnaa ee uu kashaqayn jiray Kambanigu.
Madaxda Kambaniga Salaam Bus ayaa lasheegayaa in ay macaamiishooda ku war galiyeen in laga wareejin doono dhinaca Gobolka Canfarta oo ah marin aad udheer oo ay adagtahay in si fudud loogu kala safro.
Wadadan dheer ee Shirkadu ay macaamiisheeda marin doonto ayaa kordhinaysa lacagihii baabuuta lagu raaci jiray waxaana lasheegayaa in nooligu uu gaadhayo 850 bir oo ah laba jibaar lacagtii horaan basaska loogu raaci jiray.
Shirkada Salaam Bus ayaa arintan kusababaysay amaanka baabuurteeda iyo rakaabka ay qaadayaan, waxayna shirkadu sheegtay in aan lamari karin dhulkii horaan loo dhex qaadi jiray ee Oromia halkaas oo noqotay halaqyo galeen.
Shirkada Salaam Bus ayaa dhowr jeer oo hore laweeraray waxaana lagubay xarumo ay kulahayd magaalada Addis Ababa iyo waliba Gobolka Oromia, waxaana lasheegayaa in qaar kamid ah shaqaalaha shirkada ladhibaateeyay.
Shirkada Salaam oo ay leeyihiin ganacsato Tigree ah ayaa umuuqata mid quus kataagan ganacsigii wadanka dhexdiisa ahaa, waxayna umuuqataa mid aan shaqada siiwadi doonin.